9th May, 2018 By प्रविण रिमाल
शिक्षा त्यो चेतना हो जसले व्यक्तिको सोचलाई परिवर्तन गराउँछ । शिक्षा त्यो क्षमता हो जसले व्यक्तिलाई योग्य मानव बन्न सिकाउँछ । हुन त, हिजोको शिक्षा प्रणाली र आजको शिक्षा प्रणालीमा आकाश–पातालको फरक छ । गुरुकुलमा गुरुहरुले दिएको शिक्षा र आज प्रविधिले दिने शिक्षाको आकार, प्रकार र स्वरुप सबै भिन्न छन् । सानो क्षेत्रमा बसेर सिमित व्यक्तिले लिने त्यो समयको शिक्षा र खुल्ला शैलीमा आकाशभन्दा विशाल ज्ञानको भण्डार, अहिलेको शिक्षामा अनपेक्षित परिवर्तन भेट्न सकिन्छ ।
प्रविधिको युग वा विज्ञानको युग भन्ने स्लोगनहरु आजभोली सामान्य भइसके । त्यसो त, प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढीले १२ को परीक्षा उत्तीर्ण गर्छन् । त्यसपछि उच्च शिक्षाका लागि विश्वविद्यालयको यात्रासँगै रोजगारीको खोजी पनि सुरु हुन्छ । कति उच्च शिक्षाका लागि स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयको यात्रा सुरु गर्छन् भने कतिपय रोजगारीका शिलशिलामा स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न कम्पनीमा जान्छन् ।
प्रविधिको विकाससँगै रोजगारीका स्वरूपमा पनि परिवर्तन आएको छ । परम्परागत जागीर खाने र खुवाउनेभन्दा आधुनिक सूचना प्रविधिको कारण नयाँ र सक्षम जनशक्ति र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भइरहेका छन् । आजको युगमा आइटी एउटा लोभलाग्दो करियर र राम्रो आम्दानीको माध्यम बनेको छ । नेपालमा रहेका सफ्ट्वेयर निर्माण कम्पनीहरुले सयौंको संख्यामा युवाहरुलाई रोजगार दिइरहेका छन् । त्यसैगरी इन्टरनेट र मोबाइल सर्भिस प्रोभाइडरमा आइटीको स्कोप ज्यादा छ । त्यस्तै, एनटिसी, एनसेल, वल्डलिंक, सुबिसु, ब्रोडलिंक जस्ता कम्पनीले धेरैलाई रोजगार दिएको छ । त्यसैगरी कल सेन्टरमा पनि हजारौँले रोजगारको अवसर पाएका छन् ।
आइटी कम्पनीहरूले डिजाइन, ल्याङ्वेज, मार्के्टिङ, एनालाइसिस र म्यानेजमेन्ट आदिसँग समन्वय गरेरअघि बढिरहेको हुनाले पनि आइटी कम्पनीहरूमा जागिर खानका लागि आइटी नै पढ्नुपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । आइटी पढ्नेहरू सफ्ट्वेयर इन्जिनियरिङ मात्र नै बन्नुपर्छ भन्ने छैन । यसबाहेकका गेमिङ, इन्टरफेस डिजाइन आदिमा आबद्ध भएर पनि आफ्नो सीप र सिर्जनाबाट धेरै नै आर्जन गर्न सकिन्छ । आइटीका विद्यार्थीहरुले सफ्टवेयर उद्योग, आर्थिक संस्था, स्वास्थ्य, कर्पोरेट संस्थाहरू लगायतमा सहजै उत्कृष्ट जागीरको अवसर प्राप्त गर्न सक्छन् ।
बैंकिङ क्षेत्रमा पनि आइटी विज्ञको माग बढ्न थालेको छ । इन्टरनेट र नेटवर्क सेक्युरिटीमा विश्वमै डिमान्ड बढ्न थालेको छ । ह्याकर्सहरूले वेबसाइट तथा सफ्टवेयर नै ह्याक गर्ने कारणले सेक्युरिटीको डिमान्ड बढिरहेको छ । नेपालको सरकारी क्षेत्रमासमेत पहिलेकोभन्दा धेरै आइटी प्राविधिकको माग हुन थालेको छ । लोकसेवा आयोगले पनि कम्प्युटर इन्जिनियर तथा आइटीको माग गर्न थालेको छ । यसरी हरेक क्षेत्रमा आइटीको माग बढिरहेको छ । त्यसो त, राम्रो मोबाइल एप्स बनाउन सक्ने व्यक्तिले नेपालमै लाखदेखि करोडसम्म कमाउँछन् । आइटीमा इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीलेसमेत हजारौ कमाइरहेका छन् ।
प्लस टु पछि विभिन्न रोजगारमा लाग्ने सोच लिएका विद्यार्थीहरुले विभिन्न कोर्सहरु सिकेर ती क्षेत्रहरुमा लाग्न सक्छन् । देशमा रोजगारको कमी छैन, कमी छ त मात्र सीपको । अहिले यस्ता सीपमूलक कोर्सहरुको विकास भएको छ जुन ६ महिनादेखि १ वर्षभित्रमा नै पूरा हुन्छन् र राम्रो जागीर पनि पाइन्छ ।
आउनुहोस चर्चा गरौँ प्लस टु (+2) पछि पूरा गर्न सकिने पाँच कोर्सको जस्का कारण सजिलै रोजागरीसँगै आकर्षक आम्दानी पनि गर्न सकिन्छ।
१) वेव डिजाइनिङ
वेब डिजाइनिङ एउटा यस्तो क्षेत्र हो जहाँ रोजगारको कुनै कमी छैन । यस कोर्समा कोडिङ भाषा जस्तै एचटीएमएल, पीएचपी, जाभा स्क्रिप्ट, फोटोसप वा फायरफक्स, सिएसएस, सेक्युरिटी इत्यादि सिकाइन्छ । जबसम्म वेव डिजाइनर सिर्जनशिल हुँदैन तबसम्म वेवसाइटहरुको निर्माण हुन सक्दैन । यो कोर्स जानेकाहरुले घरमै बसेर पनि काम गर्न सक्छन् । नेपालमा एक सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले वेब डेभलप्मेन्टको सुविधा दिइरहेका छन् । नेपालमा वेब डिजाइनिङ कोर्स सिकाउने विभिन्न संस्थाहरुको स्थापना भएको छ । प्रोफेसनल वेव डिजाइनिङको कोर्स १ वर्षको हुन्छ तर यस बाहेक ३ देखि ६ महिनाको छोटो अवधीका कोर्स पनि उपलब्ध छन् ।
२) भीएफएक्स र एनिमेसन
यो कोर्समा भिजुअल इफेक्ट, एनिमेशन, ३ डी टेक्नोलोजी, ग्राफिक्सआदिको बारेमा ज्ञान दिइन्छ । भीएफएक्स र एनिमेसनको माग बढेसँगै यो क्षेत्र धेरै चर्चित भएको छ । फिल्म क्षेत्रको साथै आत्मनिर्भर रहेर काम गर्नका लागि पनि यस क्षेत्रमा धेरै स्कोप छ । विकसित देशहरुमा धेरै अघि आइसकेको एनिमेशन नेपालमा भने नौलो हो , एक दशक यता नै एनिमेशनको प्रयोग हुन शरु भइसकेको हो । शुरुमा व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग हुने कुरा अहिले ब्यवसायिक रुपमा अघि बढेको छ । विभिन्न विज्ञापन, फिल्महरु एनिमेशन बिना अधुरो हुने भइसकेको छ ।
एउटा एनिमेशन कोर्स पूरा गरेको ब्यक्तिले महिनामा ५० हजारदेखी ४ लाख रुपैंयासम्म तलब खाने गर्छ । नेपालमा रहेकाहरुले विदेश निर्यातद्वारा पनि पैसा कमाउन सक्छन् । विदेशमा १ हजार डलर लाग्ने एनिमेसन नेपालमा २ सय डलरमा खरिद गर्न सकिन्छ । यसका कारणले थोरै लगानीमा धेरै प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ ।
३) हार्डवेयर र नेटवर्किंङ
यदी कुनै विद्यार्थी आईटी क्षेत्रमा रोजगार प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने हार्डवेयर तथा नेटवर्किङ सम्बन्धी कोर्स गर्नु उचित हुन्छ । यो क्षेत्रमा जानु अघि कम्प्यूटरको हार्डवेयरहरु जस्तै चिप्स, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, सर्किट बोर्ड र मडेम, डिस्क र प्रिन्टर का बारेमा जान्नु जरुरी छ । यो क्षेत्रको विस्तार र पहुँचलाई हेरेर धेरै लेभलको कोर्सहरु उपलब्ध गराइन्छ । जस्तै सर्टि्फिकेट कोर्स, अन्तर्रा्ष्ट्रिय सर्टि्फिकेशन, डिप्लोमा इन हार्डवेयर र नेटवर्किंग र डिग्री स्तरिय कोर्सहरुमा विशेष ट्रेनिङ दिइन्छ ।
यो कोर्सहरु सकाएपछि सिस्टम एडमिनिसट्रेटर, नेटवर्क एडमिनिसट्रेटर, सिस्टम इन्जिनियर, टेक्निकल सर्पोट, हेल्प डेस्क टेक्निसियन, आईटी टेक्निसियन, आईटी एडमिनिसट्रेटर, फिल्ड सर्भिस र इन्टरनेट स्पेशलिष्ट पनि बन्न सकिन्छ । यो क्षेत्रमा सुरुवाती तलब १० हजारदेखि १५ हजारसम्म पाइन्छ र यदि पछि आफ्नो नेटवर्किङ र राम्रो काम हुँदै गयो भने ५० हजारदेखी १ लाखसम्म तलब पाइन्छ ।
४) सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट
साफ्टवेयर डेभलप्मेन्टमा पनि रोजगारीको कुनै कमी छैन । अहिले विश्वबजारमा सबैभन्दा बढी माग भएको जागीर भनेको सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट हो । अहिले सफ्टवेयर कम्पनी धेरै नै विकसित भइसकेका छन् । विश्वबजारमा सफ्टवेयर कम्पनीले धेरै नै ठूलो स्थान ओगट्न सफल भइरहेका छन् । नेपालमा पनि दर्जनौँ सफ्टवेयर कम्पनीले राम्रो काम गरिरहेका छन् । सफ्टवेयर डेभलपरहरूले कुनै पनि प्लेटफर्म प्रयोग गर्न सक्छन्, जस्तै भी.बी. नेट, भिजुअल बेसिक (भि.बी.), जाभा, पिएचपी, डेल्फी, ओराकल, बिजनेस इन्टेलिजेनस आदि । डियरवाल्क, डिटू हकाई, योमरी, एफवान सफ्टलगायतका सफ्टवेयर कम्पनीले सयौँ नेपाली जनशक्तिलाई राम्रो पारिश्रमिक दिएर काम गरिरहेका छन् । नेपालभित्रै बैंकिङ, फाइनान्स र शिक्षा क्षेत्रमा मर्कन्टाइल, इन्फो डेभलपर्स, मिदासलगायतका कम्पनीले काम गरिरहेका छन् ।
५) मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट
मोबाइल एप्लिकेसन डेभलपमेन्ट अहिलेको सबैभन्दा बढी माग गरिएको र द्रुत गतिमा बढिरहेको करियर क्षेत्र हो । नेपालमा मोबाइल एप्सको स्कोप बढ्दो छ । नेपालमा स्मार्टफोनको प्रयोग बढ्न थालेसँगै एप्स बनाउने बिजनेससमेत बढ्दै गएको हो । वेबसाइटजस्तै एप्सको पनि कुनै भौगोलिक सीमितता नहुने भएकाले संसारको जुनसुकै स्थानमा बनेको एप्स संसारभरका मानिसले प्रयोग गर्नसक्ने भएका छन् ।कतिपयले एप्स बनाइदिएर त्यसबापतको रकम लिने गरेका छन् । कतिपयले एप्स बनाउने र त्यसका प्रयोगकर्ता धेरै भएपछि एप्समा विज्ञापन गरी ठूलै रकम कमाउने गरेका छन् । नेपालमा धेरै चलेका एप्सबाटै लाखौँ आम्दानी गरेका छन् ।
नेपालमा एप्सको बजार ठूलो छ । नेपालमा बसीबसी विदेशी एप्स बनाउन सकिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग हुनसक्ने एप्स बनाएमा राम्रो आम्दानी हुनसक्छ । त्यसबाहेक विदेशमा रहेका कम्पनीहरूका लागि पनि एप्स बनाउने काम अर्थात् ‘आउटसोर्सिङ’ गर्न सकिन्छ । त्यसबाहेक नेपालमै पनि एप्सको व्यापार बढिरहेको छ । विभिन्न आइटी कम्पनीले एप्स बनाउने दक्ष मानिस खोजिरहेका छन् । कतिपयले व्यक्तिगत रूपमै एप्स बनाएर कमाइ गरिरहेका छन् भने कतिपयले कम्पनी नै खोलेर काम गर्दै आएका छन् । नेपालमा अहिले एक सयभन्दा बढी कम्पनी एप्स निर्माणमा संलग्न छन् । राम्रो मोबाइल एप्स बनाउनेले नेपालमै लाखदेखि करोडसम्म कमाउँछन् ।आइटीमा इन्टर्न गर्ने विद्यार्थीले समेत हजारौ कमाइरहेका छन् ।
यस बाहेक पनि आइटीका अरु कोर्सहरु गरी बिद्यार्थीहरुले सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एड्मिनिस्ट्रेटर, सिस्टम म्यानेजर, प्रोजेक्ट म्यानेजर, सफ्टवेर प्रोग्रामर, डेटाबेस डिजाइनर, डेटाबेस एड्मिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क एड्मिनिस्ट्रेटर, ग्राफिक्स डिजाइनर, वेब डेभलपर, वेब डिजाइनर, आइटी अफिसर, इन्फरमेसन सेक्युरिटी एनालिस्ट, इन्फरमेशन सिस्टम अडिटर, क्रिप्टोग्राफर, एप्लिकेशन डेभलपर, टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियर, सफ्टवेर क्यालिटी अस्युरेन्स इन्जिनियर, टेक्निकल कन्टेन्ट राइटरलगायतको रुपमा काम गर्न सक्दछन् ।
अन्तमा : प्रविधिसँग जोडिएका व्यक्तिहरुले ‘गरे के हुन्न र ?’ भन्ने उखानलाई थप प्रमाणित गरेका छन् । अवसर सिर्जना गर्नलाई त नेपालमा प्रशस्त सम्भावनाहरु छन्। यहाँ ठूला ठूला होटलहरु खुल्दै छन्, पर्यटन उद्योगमा ठूलो लगानी भित्रिएको छ, हाइड्रोमा पनि त्यत्ति कै मात्रामा अवसरहरु छन्। अन्तराष्ट्रिय चेन भएका बैंकरुका साथै बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्। आइटीको माग बढ्दै गएसँग रोजगारीका प्रशस्त अवसरहरु यहाँ देखा पर्दैछन्। स्वदेशमै धेरै गर्न सकिन्छ भन्ने युवा जमात पछिल्लो समय बढ्दो छ । नेपालको स्वणीम भविष्य निर्माणका लागि पनि युवापुस्ता स्वदेशमै रहेर काम गर्न आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधि र प्रविधिक शिक्षाले थप उत्साह प्रदान गर्ने निश्चित देखिन्छ ।